भजनसंग्रह 120 ERV-NE - मन्दिरतर्फ - Bible Gateway
भजनसंग्रह 119भजनसंग्रह 121
भजनसंग्रह 120 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
मन्दिरतर्फ गइरहेको बेलाको गीत वा भजन।
1 म सङ्कटमा थिएँ,
मैले परमप्रभुको सहायता मागें।
अनि उहाँले मलाई बचाउनु भयो!
2 हे परमप्रभु, मलाई ती मानिसहरूबाट जोगाउनु होस्,
जसले मेरो बारेमा झूटो बोलें।
ती मानिसहरूले भनेका कुराहरू सत्य थिएनन्।
3 झूटो बोल्नेहरू, तिमीहरूले के पाउँछौं भनेर सोच्यौ?
जान्दछौ तिमीहरू आफ्नो झूटो कुराहरूबाट के पाउँछौ।
4 सैनिकको तीखो बाणले
र तातो कोइलाहरूले दण्ड दिनेछ।
5 तिमी झूटा मानिसहरू, मोशा छेउमा बसिरहेका जस्तै यो
केदारको पालहरूभित्र बसिरहेका छौ।
6 म शान्ति घृणा गर्ने मानिसहरूसँग
धेरै समय सम्म बसें।
7 मैले भने म शान्ति चाहन्छु,
यसकारण तिनीहरूले युद्ध चाहे।